Maamulka cusub ee gobolka Mudug iyo Gaalkacyo oo xilkii la wareegay; sugidda amniga oo ay siin doonaan mudnaanta koowaad. – Radio Daljir
Maamulka cusub ee gobolka Mudug iyo Gaalkacyo oo xilkii la wareegay; sugidda amniga oo ay siin doonaan mudnaanta koowaad.
Galkacyo, April 267 – Xaflad xil-wareejin ah ayaa maanta lagu qabtay xarunta dawladda hoose ee magaalada Gaalkacyo taas oo ay xilalka kula kala wareegayeen, guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamuud Cuuke oo noqonaya guddoomiyaha cusub ee gobolka iyo magaalada Gaalkacyo iyo duqii hore ee Gaalkacyo Cabdiraxmaan Maxamuud X. Xasan.
Xafladdaan xil la kala-wareegidda ah ayaa waxaa goob-joog ka ahaa xubno wasiirro ah oo ka tirsan golaha xukuumadda Puntland, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen wasiirrada caddaaladda, shaqada iyo shaqaalah, caafimaadka iyo sidoo kale taliyaha guud ee bilayska Puntland iyo xubno kale oo ka tirsan qaybaha bulshada iyo maamulka.
Intaan la kala tirsan maalka iyo mas’uuliyadaha awoodeed ee degmada ayaa maamulkii hore ee degmada waxaa ay sharraxaad dheer ka bixiyey wax-qabadkoodii muddadii ay xilka hayeen iyagoo sheegay in ay ku tallaabsadeen hormar badan oo iskugu jira, xagga kobcinta dhaqaalaha, dhissidda hab-maamuleedka, dhawrista amniga, dhaqan-galinta sharciyo muddo dhul-yaal ahaa iyo dhaqaajin arrimo badan ee xagga hormarinta danaha bulshada ah.
Maamulkii hore ee degmada waxay tilmaameen in ay soo food-saareen caqbado badan oo dhinacyada bulshada iyo maamullada ka soo wajahay kuwaasi oo degmo ahaan ka miisaan-waynaa ayna maarayn waayeen iyadoo dawladda dhexe ku dhaliilay in ay ka gaabisay hawlihii looga fadhiyey gaar ahaan amniga magaalada Galkacyo.
Dhinaca kale guddoomiyaha cusub ee maanta xilka la wareegay Cabdiraxmaan Maxamuud Cuuke ayaa ku dheeraaday xil la-wareegid kaddib wax-qabadkiisa iyo qorshaha cusub ee uu doonayo in uu ka hirgaliyo gobolka, waxaana uu sheegay tallaabadiisa ugu horrayso in ay noqon-doonto sugidda amniga iyo nabad-galyada.
Guddoomiyyuhu wuxuu amar ku-bixiyey laga bilaabo maanta magaalada dhaxdeeda in aan wax hub ah lagu wadan-karin, ciddii lagu arko hubna tallaabo cad laga qaadi-doono, iyagoo taliska bilayska gobolka faray in ay gutaan waajibaadkooda sharcigana la tiigsadaan ciddii ka hortimaadda go’aamadii guddiga nabad-galyada gobolka oo mamnuuc ka dhigaya qaadashada iyo ka-ganacsida hubka noocyadiisa kala duwan.
Munaasabaddaan maanta ka dhacday xarunta D/hoose ee ay xilalka kula kala wareegeen maamulkii hore ee degmada Galkacyo iyo midda cusub ee dhawaan loo soo magacaabay mas’uuliyadda heer gobol iyo mid degmo ee gobolka Mudug ayaa waxa ka sii horraysay isla xaflad kale oo shalay galinkii danbe lagu qabtay xarunta maamulka gobolka taas oo iyana ay xilal kula kala wareegayeen maamulkaan iyo midkii hore ee gobolka.